Shirkii Tuugmada Fara-godka Somaliweyn oo uu ku Fashilamay Jwxo-shiil – Rasaasa News
Shirkii Tuugmada Fara-godka Somaliweyn oo uu ku Fashilamay Jwxo-shiil
Jul 22, 2010 Shirkii Tuugmada Fara-godka Somaliweyn ee uu ku Fashilamay Jwxo-shiil
Waa su’aalee horta maxaa sababay ama kalifay in Jwxo-shiil xiligan uu yidhaahdo illaa iyo illaa shir waa in aan shir deg deg ah qabtaa. Kaas oo loogu baaqay in ay ka soo qayb galaan dhamaan beelaha Somaliwayn, Oromo iyo Amxaaro.
Waxaanu dib u milicsan karaa Dhuun-yeedhintiisa, wafadkiisa ama Eedaadkiisa uu kolba gidaar taabanayo.
Jwxo-shiil wuxuu naakhuude ka ahaa Doon baxaari ah “Safiinatu xayawaan” oo eegga degtay wixii saraa oo dhan doontu way la degtay farsamo xumadiisa awgeed, noolahii doonta saaraa intoodii badneyd way hafteen oo mawjadihii baa liqay.
Waxaa ka soo badbaaday koox shiico ah oo qoyskiisa ah oo u heysta inuuba yahay Muqtada Al sadarkii 2aad oo say silsilad bir ah isula dhacayeen labada garab iyo laabtuba dhiigu tifiq tifiq ka leeyahay indhahooduna kor u jiladan yihiin oo ku dhafsan iyo goosan gaas dhagoole ah oo hal hays u yahay “Dab dameeraad yuu san bakhtiyin baan ka leeyahay”!
Waa wax aan dhicin in Dameero kulmaan oo ay dab shitaan, qolyaha sidaas qaba meherad li,idooda meel kastana way taagan yahiin, oo qallo iyo qoonsi midna ma leh waa sida MACALIN KABUUBSANE (Macalin Timire) oo kale oo miidhan.
Nin baa yidhi “horta maxaa hilbahayga iyo geedha Magan isu geeyey” ? kooxda shiicada ah iyo goosanka gaas dhagoole ma is weydiyeen Jwxo-shiil wuxuu garabkiisa ina Cismaan –Dacay Jwxo ku sheego in ay garabkiisa yihiin maanta ugu dhex saydhay Somaliweyn oo uu hoos ugla heshiiyey Xuseen Caydiid, Ina xaaji masale iyo kuwo la mid ah.
Ma aha markii 1aad iyo markii 2aad ee waa markii 3aad ee uu Somaliweyn iyo musuliyiinteda gondaha qabsado inta caanka ah inta qarsoon mooyee.
Xiligii uu Cabdullahi Yusuf xilka hayey buu Jwxo-shiil London Hotelkii uu daganaa ugu tagay wuxuu ku yidhi waxaa ka mid ahaa “kolay waad na iibsan doontaane anaga iyo Meles Zanawi nawada hadalsii Madaxweyne.”
Jawaabtii Cabdullahi Yusuf waxay ahayd “marxaba iyo gudoon, hadaan ku dhaqaaqi”
Dabadeed Jwxo-shiil baa codsi soo jeediyeey ah xagg dhaqaale oo ku yidhi “waxaan rabi lahaa inaan labada Gole isugu yeedho oo aan ka dhaadhiciyo lana qabadsiiyo, meela fog fogna way ku kala sugan yahiin, Tigidho ay ku yimaadan, Hoteelo ay dagaan iyo xarun lugu kulmiyo baan u baahnahay?” Madaxweynihii hore ee Cabdullahi Yusuf wuxuu siyeey oo u saxiixay Cheque $100,000 ah, Adunkaas Jwxo-shiil wuxuu sheer kula galay xawaladaha Somaliyeed mid ka mid ah oo uu magac kale oo isla qooskiisa ah ku diwaan galiyeey.
Isla maalintiiba Safarada Eretaria ayaa ka war heshay, gurigiisa ayey ugu yimaadeen nabad sugida dalkaas iyagoo u wada Tigidhkii diyaarada uu beri ku dhoofi lahaa xaggaas iyo Asmara- Isawes Afwarqi baa kuu yeedhay bay ku dhaheen wuuna dhoofay.
Cabdullhai yusuf baa loo sheegay ruxii wadahadlka iyo wanwanta u galay meesha uu ka buskiciyeey! Cabdullahi Yusuf waxaa laga hayaa “War ruuxa sow afkiisa iyo dhagihiisu isma maqlaan wa yaabee.”
Kulankii 2aad ee Somaliweyn ee uu ugu gacan hadinayeey guryo noqoshadiisu wuxuu ka dhacay waddanka NORWAY casimadiisa OSLO markay taariikhdu ahayd 13.06.2010.
Waa “diin god gal god gorey gal” caqligiisa gudhan ee abeerka ah waxaana u sawir may Garabkisa Jwxo ku sheega ah oo uu ka imaan belay masuugsan yahayna kooxdan sida Abtidoon, Qaaxo, In-adhuubo iyo Maclin timre oo hada ku soo biiray in ay badbaadiso dunuubta uu ka galay dadweynaha Somali Ogadeeniya ayuu isugu jijibinayaa Somaliweyn in uu gabaad ka dhigto.
Dhariga karka maxaa ka keenay? Waa kuleylka. Shibanayaasha ma yeedhanada daba hashleynaya Jwxo-shiil ina Cismaan Dacay shir ku sheegii London ee markii hore laga hor istaagay ee dadweynaha Somalida Ogadeeniya cagta ka saareen Dugsigii sare ee Featherstone ee Southall ee ay ku hungoobeen dhowrka jeerna iskaga dabo noqdeen, ka diban ula dhuunteen si deg deg ah dugsiga HANWEL oo Mareexaan hore u qabsaday wuxuu ahaa MAY DAY! MAY DAY1 May DAY!.
Taas oo macnaheedu afka Somaliga ku yahay waan dagahaye ii soo gurmadaaye oo ii badbaadiyaaye! – waa habar wacashada ama catoowga marka markab dagahayo bada Ama shiidahayo.
Gunuuncisa hal ku dhigiisu ama u jeedadiisu waxay tahay sidii ban dugsi la,a dabeyshoodayeey xageen dad muslin ka racaa.
Isma oga agoon iyo ninkii aabahood dilaye ! dadkaad waalidkood iyo walalhoodba laysaa ku weerare ma ogtahay? Wadnahagu nugulaa waa wareydu waa maxay ?
“SOS” oo macnaheedu yahay Save of Soul waxa ka yeedhaya ee uu Jwxo-shiil la gununacayo waa saas ee uu Somaliweyn shiraarka ugu qabanayo.
Dadkaad aabayaashood, walaalahood, nimankoodii iyo wiilashoodii qoriga iyo qoolka ku dishay baa qalinka kugu dilahaya ee ma ogtahay kuna dili, kulana dabo taagan oo aan ka daaleyniin maalin iyo habeenba.
Kuwa kuu haysta in aad tahay Muqtada Al sadrigii 2aad, waxaan u sheegeynaa in aad tahay Milosevic 2aad, ilaa aanu u taxaabno isga oo xakameysan qolkii uu milosevickii ka horeyeey ee Serbiga ahaa ku inta hooday (the punishment room) ee ku yaala Hague ahana Maxkamada Cadaalada ee Caalamka wadanka Netherlands.
Dhuunyeedhintiisa = waa marka geelu uu dhimanyo ee mawdku ku soo xaadiro intuu luquntiisa dheer laabo ayuu labadiisa garab ku dhagaa kolkaasu guuxaa oo dhahaa (Dhiidh,Dhiidh)waana markay naftu ka baxeyso.
Wafaadkiisa = waa markii basharku ama aadnahu uu il geeriyaad leeyahay oo malak- mawdku ku soo xadiro oo nafta laga siibayo.
Eedaadkiisa = waa markii siiba ri`yaha waraabuhu u soo dhaco ee uu la tago ee uu xerada kala baxo dhawaaqa ka yeedha weeye ee nafta ka quusto.
Amakaag iyo Yaab isagay ku ekaan
Released ONLF Central Committee From Jail
Sometimes You Do Not Realise The Power You Have